७० प्रतिशत बालकालिकालाई रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको डा. आरपी बिच्छाको दाबी — Bhaktapurpost.com
७० प्रतिशत बालकालिकालाई रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको डा. आरपी बिच्छाको दाबी
अस्पतालका निर्देशक डा. आरपी बिच्छाले विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार २ महिना पहिले १० बेडको इन्टरमिडियट केयर युनिट स्थापना गरिएपछि करिब ७० प्रतिशत बालकालिकालाई निजी अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको दाबी गरेका छन् ।
अस्पतालको ५८औं वार्षिकोत्सवमा उनले यो जानकारी दिएका हुन्। अझै पनि एकदिनमा ४/५ बिरामी अन्य अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता भने कायमै रकेहो उनले बताए ।
कान्तिमा आईसीयू बेडको अभावले देशका विभिन्न ठाउँबाट आउने बिरामीलाई अन्य अस्पताल पठाउनुपर्ने अवस्था अझै पनि रहेको अस्पतालका निर्देशक डा. आरपी बिच्छाले बताए ।
कान्ति बाल अस्पतालले चालु आवको पुससम्ममा ७० हजार बालबालिकालाई ओपीडी सेवा दिएको जनाएको छ ।
ओपीडीतर्फ ७० हजार र आकस्मिकतर्फ २७ हजार बालकालिकालाई सेवा दिइएको अस्पतालको ५८औं वार्षिकोत्सवमा अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. आरपी बिच्छाले गत आवमा ओपीडीतर्फ १ लाख ५५ हजार र आकस्मिकतर्फ ५५ हजार बालबालिकालाई सेवा दिइएको बताए ।
हरेक वर्ष १० देखि १२ प्रतिशत सेवाग्राही बढेको उल्लेख गर्दै बिच्छाले गत वर्ष २ हजार बालबालिकाको शल्यक्रिया गरिएको र १० हजारले अन्तरंग सेवा लिएको बताए ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति प्रोेफेसर डा. डीएन शाहले बालरोगको क्षेत्रमा नेपालले गरेको केही विश्वस्तरीय अनुसन्धान गर्व गर्न लायक भएको बताएका छन् ।
कान्ति बाल अस्पतालले अहिले चौबीस घण्टे सिटी स्क्यान सेवा सुरु गरेको छ । यस्तै २ सिफ्टमा अल्ट्रासाउन्ड सेवा पनि प्रदान गरिरहेको छ । अबको १ वर्षभित्र करिब ५० जना बस्न मिल्ने कुरुवा घरको स्थापना गर्ने अस्पतालले योजना बनाएको छ । त्यसका लागि डीपीआर तयार भएर नक्सासमेत पास भइसकेको छ ।